Ebe nchekwa Celbridge - IntoKildare
Celbridge, nke dị n'akụkụ Osimiri Liffey na naanị nkeji iri atọ n'ebe ọdịda anyanwụ nke Dublin, bụ mpaghara nwere ihe nketa, gụnyere ọtụtụ saịtị Ndị Kraịst oge ochie na ọmarịcha ihe nketa nke nnukwu ụlọ nwere akụkọ dị ịtụnanya.
Soro nzọụkwụ Arthur Guinness, ikekwe aha kacha mara amara na Ireland, wee were pint n'otu n'ime ụlọ oriri na ọ hostụ hostụ dị n'okporo ụzọ a ma ama ebe amụrụ ya. Ihe akpụrụ akpụ nke ndụ ya na-egosi ebe a mara mma ebe ọ nọrọ ọtụtụ oge ọ bụ nwata. Site ebe a ị ga -eso ụzọ Arthur gaa Ardclough ebe enwere ebe ntụgharị okwu na ihe ngosi, wee gaa n'ihu Oughterard Graveyard - ebe izu ike ikpeazụ ya.
Banye n'akụkọ ihe mere eme na Celbridge Heritage Trail - site na Christian Tea Lane nke mbụ, ebe izu ike nke ndị Grattans; gaa na Ọkà Okwu Connolly's Castletown House - ụlọ kacha mma na Georgia; mgbe ahụ gaa n'ihu na Celbridge Village akụkọ ihe mere eme na-ewere ụzọ osimiri dị jụụ ma ọ bụ okporo ụzọ osisi mara mma maka nleta na Celbridge Abbey nwere njikọ na Jonathan Swift. Maka ihe na -akpali akpali karị, gịnị kpatara ị ga -eji nwee ọmarịcha ụgbọ mmiri na -agbada na Osimiri Liffey, bọọdụ ụgbọ mmiri na Cliff Lyons ma ọ bụ okirikiri n'akụkụ Ọwa Osimiri Ukwu gaa Sallins.
Ime ụlọ naanị Hotels Bed & Breakfast Isiri onwe nri Maa ụlọikwuu Kildare
Ụlọ ọrụ ntụrụndụ Airtastic Celbridge
Ihe na-atọ ụtọ maka afọ niile nwere bọọlụ, obere golf, ebe egwuregwu na egwuregwu dị nro. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị America na saịtị.
Obodo Obodo Ardclough
Dlọ Ardclough Village Center nwere ụlọ 'Site na Malt ruo Vault' - ihe ngosi nke na-akọ akụkọ banyere Arthur Guinness.
Gulọ Guinness ahụ nwere ike ịbụ ụlọ nke ama ama ama mana ọ dị ntakịrị ntakịrị ma ị ga-achọpụta na ebe amụrụ ya dị na County Kildare.